गायिका शर्मिला गुरुङले अब नेतासंग बिबाह गर्ने [भिडियो] – Jaljala Online
गायिका शर्मिला गुरुङले अब नेतासंग बिबाह गर्ने [भिडियो]
Posted on February 14, 2020 February 14, 2020 Author Jaljala Online	Comment(0)
फाल्गुन २, काठमान्डौ ।
चर्चित गायिका शर्मिला गुरुङले एक अन्तर्वार्तामा अब आफुले बिबाह गर्ने बताएकी छिन । अब आफुले नेता संग बिबाह गर्नु पर्छ कि भन्दै यस्तो खुलासा गरेकी हुन् ।
२० बर्ष सम्म गायन क्षेत्रमा निरन्तर लागेकी गायिका गुरुङ अहिले सम्म अबिबाहित छिन । आमा बाबाको चाहाना भएको भन्दै अब घरजम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
दुई दशक देखि निरन्तर लोकगित क्षेत्रमा दमदार जमिरहेकी लोक गायिका शर्मिला गुरुङ लोकगित क्षेत्रको खम्बा हुन् । लोकगित क्षेत्रलाई बिकृति र बिसंगतिदेखी टाढा राख्नु पर्छ भन्ने शर्मिला गुरुङ जेन्टल गायिका मध्यकि एक हुन् । उनका गितहरुमा छाडापन तथा उत्ताउलो पन कतै देखिदैन ।
विभेद बोकेको यो समाजमा नारीहरु पूर्ण अधिकारबाट अझै बन्चित रहेको बताउछिन । विभेदयुक्त यो समाजमा बैबाहिक जीवनमा बाँधीएपछि महिलाहरुलाई आफ्नो करियरमा धक्का लाग्ने गरेको बताउछिन ।
यो समाजले आमाहरुलाई सेवा गर्ने छोरालाई जिम्मा दिएको छ तर मैले मेरी आमालाई सेवा गर्ने अबसर पाएको छु, त्यसैले म आफुलाई भाग्यामानी ठान्छु, उनि आमा प्रति सद्भाव देखाउछिन ।
शालीन स्वाभाबकि शर्मिला गुरुङ आफ्नो गायन करियरमा कहिलै बिबादित नभएको बताउछिन ।
छविराज ओझाले दिए यस्तो अन्तर्वार्ता, यस्तो छ उनको जीवनी [नालीबेली]
Posted on July 21, 2019 Author Jaljala Online
कृष्ण आचार्य/साउन ५, काठमाडौं । यो अन्तर्वार्ता हामीले नेपालखबरबाट साभार गरेका हौ । प्रेममा हुँदासम्म सबैसँग मेरो राम्रै हुन्छ। बिहे गरेर घरमा ल्याइसकेपछि अली नफापेको हो कि? कुरा नमिलेको हो कि के हो कुन्नी। सुरुमा गरेजस्तो प्रेम बिहेपछि काममा ब्यस्त हुँदा गर्न सकिनँ कि? छविराज ओझा सिनेमा निर्माणमा जति सफल छन्, उनको वैवाहिक जीवन त्यति […]
जेठ २२, काठमाडौं । बजारमा अहिले एउटा गीतको खुबै चर्चा छ, प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’ । यूट्यूब, टिकटक, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चारमाध्यममा गीतले स्थान जमाएको छ । यो खबर सुशील नेपालले लोकान्तरमा लेखेका छन् । बजारदेखि गाउँसम्म, बालकदेखि वृद्धसम्म । सबै क्षेत्र र उमेर समूहले गीत अत्याधिक रुचाएका छन् । १५ मिनेट लामो गीतको भिडियो […]
कमोडमा बसेका चर्चित तथा पुराना अभिनेता सरोज खनालले दिए यस्तो प्रतिक्रिया [भिडियो]
Posted on July 17, 2019 Author Jaljala Online
काठमाडौं । यो खबर खिलानाथ ढकालले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । नेपाली सिने उद्योगका चर्चित तथा पुराना अभिनेता सरोज खनाल शुक्रबार पच्चीस वर्षपछि सितल निवास छिरेका थिए- कलाकारकै रुपमा। ‘प्रेम पिण्ड’ चलचित्र सुटिङका क्रममा उनी पहिलोपटक सितल निवास पुगेका थिए। उनको साथमा त्यसबेला ‘प्रेम पिण्ड’ कि अभिनेत्री सन्नी रौनियार थिइन्। शुक्रबार पनि उनै रौनियारसँग सितल निवास […]
सबैभन्दा बढी खोजिएकी ‘गुमनाम’ गायिका विष्णु माझी
के मोबाइलले खोल्ला त मु.ना का.र्कीको ह.त्या र.हस्य ?